Ipropolis yokulwa nealopecia | Amadoda aQinisekileyo
Isityalo intlaka esetyenziswa njengodaka ziinyosi, isebenza ukuqinisa iindlwane zazo, kwaye ikuthandile ukukhula koboya bempuku elabhoratri. Ngokwabaphandi, ipropolis Iya kuba neepropathi zokulwa ilahleko ebantwini.
Olunye uphononongo lubonisa ukuba ipropolis inokuthanda ukuphindaphindwa kweeseli ezinegalelo ekuhlaziyweni kwakhona kwe iinwele.
El uboya kwezinye iimpuku zazisuswa nge-wax okanye nge-razor. Kuzo zombini ezi meko, iimpuku ezifumene usetyenziso olungaphantsi lwe ipropolis iinwele zabo zakhula msinya kunezinye iimpuku.
Inani leeseli eziqhotyoshelwe ekukhuleni kwe iinwele ukwanda emva kokusetyenziswa ipropolis eluswini.
La Ukulahleka kweenwele ihlala ibangelwa kukudumba. Kuba iqulethe izinto ezichasayo, ipropolis inokuthintela ukulahleka kweenwele ngenxa yempandla, kodwa ukuqinisekiswa kwale hypothesis kufuna iimvavanyo ezongezelelweyo.
El ipropolis ikwanazo neepropathi ukubola, Kwaye yayisetyenziselwa ukunyanga amathumba, ukudumba kunye nokwenzakala kumaxesha amandulo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » ZeMpilo » Ipropolis yokulwa nealopecia
Izimbo neendevu sitsho
Inqaku elilunge kakhulu, bekumnandi ukuyifunda. Ukwanga kwaye unyaka omtsha!
Phendula kwizimbo kunye neendevu